Anyị na-enyocha ndị dị egwu Box Box 9 okwu si Energy Sistem | Gam akporosis
Taa, anyị ga-ekwu maka ya a Bluetooth SPEAKER nwere isi obodo. Aka na aka anyị na ndị enyi anyị sitere na Energy Sistem anyị enweela ọ ofụ nke itinye igwe okwu okwu dị ike nke nnwale nke ndị niile gafere Androidsis. Ngwaọrụ enwere ike ibute egwu dịka anyị enwetụbeghị mbụ.
Enwere ọtụtụ ndị ọkà okwu anyị nwalere na Androidsis, mana Egwu Egwu Sistem Egwu 9 jisiri ike pụọ na ndị ọzọ. Ọkà okwu na-abịa ime oke mkpọtụ. N'ihi ike a na-enweghị atụ, ahụmịhe ụda ọ na-enye na-akọwapụta ike Sistem nwere ike.
1 Nwere onwe, ike na imewe, jụọ ya niile
2 Egosipụta na ndakọrịta zuru ezu
3 Ejiji mara mma ma dịkwa mma
4 Autonomy ruo ogologo oge, ka ụda ahụ ghara ịkwụsị!
5 Ike Sistem Music Box mpempe data 9
Nwere onwe, ike na imewe, jụọ ya niile
Nzube bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa mgbe ị na-emepụta ngwaahịa ọ bụla. Anyị na-ahụ otú ụdị dị iche iche ma na smartphones na ngwa. Ahịa ahụ juputara na ngwaọrụ nke ụdị na ụdị nha ọ bụla. Ọ bụrụ n’ị lee ndị na-ekwu okwu okwu, ha agbanwewokwa ọtụtụ.
Anyị na-ahụ n'ahịa uzo ozo di iche na agba di iche. Na kwa uru maka ihe niile masịrị ya na mkpa ya. Egwuregwu Egwuregwu Energy Sistem Igbe 9 nwere a dị nnọọ mma ma dị mfe imewe. Ma n'otu oge ahụ na-enye ike iji echekwa yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị gị ebe ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ọkà okwu maka shelf, ma na ị nwekwara ike iwere, Music Box 9 bụ ezigbo nwa akwukwo, nke ahụ na ịpị ebe a ị nwere ike zụrụ na a 15% ego na Amazon. Dynamicdị dịgasị iche dị mma, ụda dị ọcha na bass miri emi. Risesda na-arị elu n'ogo na ọkà okwu a kpọrọ ka ọ chịkwaa ụlọ ọ bụla na ụda ya.
Egosipụta na ndakọrịta zuru ezu
Igwe ihe eji egwu Energy Sistem Music Box 9 bluetooth na-apụta maka ọtụtụ akụkụ. Na mgbakwunye na a ezi na mara aesthetics, na a ike nke na-eme onwe ya ka ọ nwee mmetụta. Ọkà okwu a nwere ọtụtụ ụzọ iji 'gbasaa' ma dasie ụda ike. Daalụ nke gị Ezi waya teknụzụ, otu ihe ahụ dị na ekweisi ikuku, anyị nwere ike ijikọ ya na ọkà okwu ọzọ otu. Ma ọ bụ ndị ọzọ dakọtara nke otu ụlọ ọrụ ahụ. A na-agbakwunye nke na-eme ka ọ nweta isi ma e jiri ya tụnyere ndị ya na ya na-azọ.
Anyị nwekwara ntinye dị iche iche ka njikọta bluetooth abụghị naanị otu. Anyị nwere ike ịnụ ụtọ egwu anyị n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ijikọ a ihe inyeaka ekele USB anyị hụrụ na igbe. Anyị nwekwara ike iwebata a Micro SD kaadị ya na egwu iji kpọọ na Igbe Egwu 9. Na mgbakwunye inwe ike ijikọ ngwa ngwa ndị ọzọ site na Ọdụ USB.
Na ngwụcha, mmezi nke anyị masịrị anyị ịchọta, nke ahụ na-adọrọ uche anyị. Onyinye Egwu Egwu Energy Sistem 9 biara FM redio tuner. Anyị nwere ike na-akụ na idekọ ruo 50 dị iche iche tunings na-enwe anyị mmasị ojii. Redio bụ ihe dịịrị ọtụtụ ndị na - emepụta ihe mgbe ochie, mana ihe Energy Sistem na - enye ndị na - ekwu ya nnukwu ọrụ.
Ejiji mara mma ma dịkwa mma
Egwú Egwuregwu Egwuregwu Energy Sistem 9 gosipụtara atụmatụ dị anya site na anya nke ndị ọkà okwu eccentric nwere agba agba. Site cons, anyị nwere a matte oji oji, nke nwere tcurved nsọtụ na roba ihe. Su anya doro anya ọ mara mma otú ahụ nkecha nke usoro ya. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ezigbo ọkà okwu Bluetooth, nke na-ahụ atụmatụ ọ na-enye abụghị ihe ijuanya.
Inyocha Egwú Egwú Egwuregwu 9 site n'akụkụ anyị na-ahụ a ezigbo mụrụmụrụ, na akụkụ nkuku dị iche iche iji jikọta nke ọma n'ime etiti nke otu ihe ahụ dị ka ndị ọzọ. Anyị na-ahụ akara ngosi Energy Sistem na akụkụ aka ekpe ala… na ihe ọ bụla ọzọ. N'ezie, n'ihu, anyị achọghị ihe karịrị ihe anyị na-ahụ.
Na elu ihe mkpọchi njikwa bọtịnụ. Anyị nwere nke gbanyụọ, olu gbakwunye na mwepu, kpọọ / kwusi na ịgafe egwu ndị ahụ n'ihu ma ọ bụ n'azụ. Ihe niile ịchọrọ iji chịkwaa egwu egwu ahụ na-amasị gị site na ọkà okwu n'onwe ya. Mara na anyị nwekwara ike ịchịkwa ya site na ama anyị ma ọ bụ site na ngwaọrụ ị họọrọ ijikọ.
na Aka nri anyị hụrụ bọtịnụ abụọ. Otu n'ime ha bụ na gaba na Jikọọ na ngwaọrụ ọzọ ma nyefee ụda stereo. Pị ya na-achọ ọkà okwu ọzọ ijikọ dị ka ọkà okwu aka ekpe ma ọ bụ aka nri. Na bọtịnụ ọzọ anyị nwere ike họrọ usoro ndenye egwu na ngwaọrụ. Anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ nke Bluetooth, ọdụ ụgbọ USB maka ọkpụkpọ, micro SD kaadị ma ọ bụ redio FM.
Ọ bụrụ na i lee anya na aka ekpe anyị chọtara ihe niile uzo mmiri na uzo mmiri ma nke odi ma nke ugbu a. Anyị nwere ntinye maka ichaji batrị. Na ebe a bụ ihe na-amasịghị anyị, na-abụghị enweghị micro USB, enweghị ụdị USB, bụ ntinye dị iche iche dị ugbu a. Anyị nwekwara ntinye ọdịyo inyeaka, nke USB na oghere ebe nchekwa.
Na azụ, anyị hụrụ a vibration akpụkpọ pụrụ iche. Gbaso usoro nke nlezianya anya, na Music Box 9, Energy Sistem na-ahọrọ ihe ngwọta dị mma. The akpụkpọ ahụ, na akụkụ anọ, nke etiti nwere nnukwu akara mbinye aka na etiti. Na ederede roba na ikike dị ukwuu maka ịgagharị, ọ dị mma na azụ.
Zụrụ na 15% ego na Amazon Ogwe Egwu Egwu Sistem 9
Autonomy ruo ogologo oge, ka ụda ahụ ghara ịkwụsị!
Otu n’ime àgwà ndị dị mkpa na blu Bluetooth a na-ebugharị ebugharị bụkwa obodo kwụụrụ onwe ya. Ngwaọrụ ịga nwere batrị zuru ezu ka ụbọchị egwu ghara ịda. Ka nke a wee ghara ime Igbe Egwu Egwu Sistem nwere batrị 4.000 mAh gbatịa karịa na-atụ anya.
Na ngwaọrụ elektrọnik, ndụ batrị nwere ọtụtụ nuances. Ọbụna karị na ọkà okwu nwere ike dị iche iche na ụdị mmeputakwa. Onye nrụpụta ahụ mere anyị tebụl nwere ndụ batrị dabere na ụdị ọrụ anyị ga-enye ya. Ọ bụ ezie na anyị ga-amata na ọ ga-arụkwa ọrụ na njikọ eletriki.
El zuru ụgwọ oge inwe ike inwe 100% nke 4000 mAh bụ 2 awa na ọkara. Na batrị niile ebubo anyị nwere Oge 20 were na 50% olu ike. Mbọ 14 awa ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na olu ya na 70%. Na ụfọdụ karịa ezigbo Oge 4 were na 100% olu. N'ezie ezigbo ọnụọgụ ga-echebara.
Ike Sistem Music Box mpempe data 9
Nlereanya Egwú Music 9
Teknụzụ TWS SI
Usoro ụda 2.0
Njikọ Bluetooth 4.2
Mgbakwunye njikọ Oghere USB - micro SD - inyeaka maka ọdịyo
Onwe ya ruo awa 20 (dabere n'ogo olu)
Ihe X x 310 120 106 mm
Ibu ibu 2.085 kg
Ahịa 84.91 €
Linkzụta njikọ Egwu Egwu Sistem Egwu 9
Anyị enweghị ike zoo na onye na-ekwu okwu n'igbe egwu sitere na Energy Sistem emewo ka anyị maa jijiji. Anyị nwere mmasị na ya maka ọtụtụ ebumnuche. Akụkụ anụ ahụ bụ isi okwu dị oke mkpa, mana iji pụọ na omume nke aesthetics nke avant-garde ma họrọ maka usoro na ụdị dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ.
Ike ya na oke olu dị ịtụnanya. Egwu na-adị ọcha mgbe niile. Anyị nwere efu distortion na a definition nke bass na treble kwesịrị a ọkachamara ngwá. Maka ubi gị, maka ụlọ gị, ma ọ bụ were ya ebe ọ bụla ịchọrọ, Egwú Music 9 agaghị emechu gị ihu.
Nchọpụta uche na ọdịdị ọkachamara
Ike buru ibu n’enweghi nghota
Qualityda àgwà na-egbusi bass na treble
Ike batrị na obodo ndi mmadu
Egosipụta na njikọta
Nkwụnye njikọ abụghị micro USB ma ọ bụ USB Type C
Nnukwu ibu na ibu maka njem
A ga-akwụrịrị nrịgo elu na ogo na ike na euro
Akara ukwu dị mfe akara
Egwú Music 9
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Energy Sistem Music Box 9 okwu nyocha
Siklroad Online, ọdachi nke otu n'ime MMO egwuru egwu
Samsung Galaxy M40 dị nso karịa mgbe ọ bụla, ihe onyonyo ọhụụ gosipụtara atụmatụ ya